I-Netflix ayisebenzi - Amakhodi Amaphutha, i-Roku, i-TV ne-FireStick njll. - Ungakwenza Kanjani
Ungayilungisa Kanjani iNetflix Engasebenzi?
INetflix iyinkundla yokusakaza enkulu kunazo zonke futhi ebukwa kakhulu emhlabeni enababhalisile abacishe babe yizigidi eziyi-182 ngokuhlanganyela basakaza okuqukethwe kwayo ngamahora ayisigidi esingu-1 ngesonto. Le nkundla yokusakaza esekwe e-USA inobukhona bayo emhlabeni jikelele enikela ngosizo lwayo emazweni ayi-190 njengamanje.
Namuhla, kule ndatshana sizobhekana nezinkinga abasebenzisi beNetflix ababhekana nazo ngenkathi bezama ukusebenzisa ipulatifomu. Sizokunikeza izixazululo zesinyathelo ngesinyathelo ezizoqinisekiswa ukulungisa inkinga ye-Netflix engasebenzi.
Masingene kuwo ngaphandle kokulibala.
Izinyathelo ezijwayelekile zokuxazulula inkinga ze-Netflix:
Kulesi sigaba, sizoncoma ezinye zezinyathelo ongazijwayeza ngokushesha uma unanoma yiluphi uhlobo lwephutha. Kungenzeka kungazixazululi zonke izingqinamba kepha zilula futhi ziyashesha ukuthi zikufanele ukuzama futhi futhi zisebenza isikhathi esiningi.
Hlola ukuxhumeka kwakho kwe-inthanethi. Qiniseka ukuthi yonke into ixhunywe kahle futhi iyasebenza
Phuma futhi ungene ngemvume kuhlelo lokusebenza lweNetflix.
Gcina isheke kuzibuyekezo ze-Netflix. Kugcine kusesikhathini.
Bheka isibuyekezo se-OS sedivayisi yokusakaza
Qala kabusha idivayisi yakho yokusakaza.
Faka kabusha uhlelo lokusebenza lwe-Netflix
Zama ukuphuma ku-Netflix kuwo wonke amadivayisi.
I-Netflix Ayisebenzi Amaphutha & Ukulungiswa:
INetflix ikhombisa izinhlobo eziningi zamaphutha ngenkathi iyifinyelela. Kule ngxenye yendatshana, sizobheka la maphutha nokuthi ungazilungisa kanjani kalula. Vele ulandele izinyathelo zethu ezinikeziwe futhi ulungele ukuhamba.
1. Iphutha 0041
Leli phutha, ngokusho kweNetflix lihlobene nedatha egcinwe kudivayisi yakho noma ukuxhumana kwakho kwe-inthanethi.
Izindlela Zokulungisa Leli Phutha:
Sula idatha yohlelo lokusebenza. Lokhu kusho ukusula i-cache buildup nenye idatha yohlelo lokusebenza kusuka kudivayisi yakho.
Qala kabusha uxhumano lwakho lwe-inthanethi. Ngokuqala kabusha sisho ukuvala ngokuphelele ukuxhumana bese sikuqala kabusha hhayi nje ukuxhuma kabusha idivayisi ekuxhumekeni.
Sebenzisa inketho yokuxhumana ehlukile. Shift uye kwi-wifi ehlukile noma idatha yeselula bese uhlola ukuthi okuqukethwe kuyalayisha yini.
Bheka ukuthi uxhumano lwakho lwe-inthanethi noma idivayisi yokusakaza isebenzisa noma iyiphi inethiwekhi yommeleli. Uma kunjalo, shintshela kuzilungiselelo zakho ezijwayelekile bese uzama ukulayisha okuqukethwe.
Xhumana noMhlinzeki Wensizakalo ye-Inthanethi bese ubacela ukuthi babheke ukuthi i-router yakho isebenza kahle yini.
2. Iphutha (AIP-701)
Leli phutha futhi lihlobene nokuxhumeka kwe-inthanethi. Futhi ingaxazululwa ngezinyathelo ezimbalwa zokuxazulula inkinga
Hlola ukuxhumeka kwakho kwe-inthanethi ubone ukuthi kusebenza kahle yini. Zama ukuqala kabusha imodemu noma i-router bese ucisha izinsizakalo zommeleli i.e Ama-VPN kanye ne-DNS.
Zama ukusula idatha yohlelo lokusebenza. Kwesinye isikhathi, amakhukhi nokwakhiwa kwesilondolozi akuvumeli uhlelo lokusebenza ukuthi lusebenze kahle futhi lokhu kungaholela nephutha ku-AIP-705.
Qiniseka ukuthi uhlelo lwakho lokusebenza ne-OS zisesikhathini.
3. Iphutha le-Netflix 100
Leli phutha libangelwa lapho imininingwane egcinwe kudivayisi yokusakaza idinga ukuvuselelwa.
Sula idatha yohlelo lokusebenza kusuka kudivayisi.
Qala kabusha idivayisi yokusakaza.
Zama ukuxhumeka okuhlukile kwe-inthanethi.
4. Iphutha le-Netflix NQL.22005
Lolu hlobo lwephutha luhlotshaniswa nokulayisense kokuqukethwe nezivumelwano zomthetho. Ungathola leli phutha uma ulande okuqukethwe kusivumelwano esifanayo selayisense ngasikhathi sinye okungavunyelwa ngumnikazi walokho okuqukethwe.
Izindlela zokulungisa leli phutha:Kukhona indlela eyodwa kuphela yokulungisa leli phutha. Kumele ususe okuqukethwe okulandiwe kusuka kudivayisi yakho osukubonile. Lokhu okuzokwenza ukuthi kuzokwakha indawo yezinye izinto ofuna ukuzilanda ezingavela kumnikazi ofanayo. Futhi njengoba igumbi lenziwe ngokususa ukulanda okungafuneki, ngeke uthole leli phutha.
5. Iphutha le-Netflix NQM.407
Leli phutha le-Netflix lihlobene nezinkinga zokukhokha ngenkathi uthenga. Imbangela yalolu daba kungaba ukuthi indlela yokukhokha esetshenzisiwe ayisatholakali noma isikhungo sezezimali ozama ukusikhokha senqabile ukukhokha.
Enye imbangela eyengeziwe ukuthi ikhodi ye-zip yekhadi lesikweletu kwi-akhawunti ye-Netflix yehlukile kuleyo ebhaliswe neBhange.
Qaphela:Lesi sizathu esenzelwe ababhalisile base-USA kuphela.
Buyekeza imininingwane yakho yokukhokha. Uma ungakwazi ukubuyekeza imininingwane ngokwakho, xhumana nesikhungo sakho sezezimali futhi bazokwenzela sona.
Zama ukusebenzisa enye indlela yokukhokha ukuze uthenge.
6. Iphutha le-Netflix S7111-1957-205002
Leli phutha libangelwa imininingwane ephelelwe yisikhathi esipheqululini sakho edinga ukubuyekezwa.
Ngena ngemvume ku-Netflix kusuka kwenye idivayisi.
Bheka i-imeyili ebhaliswe ne-akhawunti yakho yeNetflix. Kwesinye isikhathi, i-Netflix ingasetha kabusha iphasiwedi yakho ngenxa yokwephula umthetho noma ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi noma ukuhlaselwa kwe-malware okutholakele.
Phuma bese ungena ngemvume futhi ku-akhawunti yakho yeNetflix
7. Iphutha le-Netflix S7111-11101
Le yinkinga ehlobene neMac Computer yeNetflix. Iqala lapho imininingwane egcinwe kusiphequluli se-Mac PC idinga ukubuyekezwa nokuvuselelwa.
Vakashela netflix.com/clearcookies kusuka kusiphequluli sakho sewebhu, lokhu kuzosula amakhukhi bese kukukhipha ku-akhawunti yakho yeNetflix.
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho yeNetflix.
8. Iphutha le-Netflix TVP-832
Leli phutha liphinde labangelwa ngenxa yokuxhumeka kwenethiwekhi. Izindlela zokudubula ezinenkinga zizofana namanye amaphutha wokuxhuma.
Iqala kabusha uxhumano lwe-inthanethi. Ngokuqala kabusha sisho ukuvala ngokuphelele ukuxhumana bese sikuqala kabusha hhayi nje ukuxhuma kabusha idivayisi ekuxhumekeni.
Hlola ukuthi ingabe ukuxhumeka kwakho kwe-inthanethi noma idivayisi yokusakaza isebenzisa noma iyiphi inethiwekhi engummeleli. Uma kunjalo, shintshela kuzilungiselelo zakho ezijwayelekile bese uzama ukulayisha okuqukethwe.
Phuma ku-Netflix bese uzama ukungena ngemvume futhi.
Xhuma idivayisi yakho yokusakaza ngqo kwimodemu yakho esikhundleni sokuxhunywa ngoxhumo olungenantambo.
9. Iphutha le-UI-120 le-Netflix
Leli phutha libangelwa lapho idivayisi yokusakaza oyisebenzisayo ithola kunzima ukuxhumana nayo noma ukuxhumana neNetflix.
Hlola ukuhambisana kwedivayisi yakho neNetflix. Ungahlola lapha . Sebenzisa idivayisi ehambisanayo kuphela.
Qala kabusha idivayisi yakho.
Zama ukuphuma ku-Netflix. Ngena ngemvume futhi.
INetflix ayisebenzi - Amaphutha & Ukulungiswa Kwedivayisi
1. INetflix ayisebenzi ku-Smart TV
INetflix idlalwa kakhulu kuma-smart TV futhi njenganoma iyiphi enye idivayisi, ijwayele ukuba namaphutha nezinkinga. Sizobheka ukuthi ungazilungisa kanjani lezi zinkinga ngokwakho.
Khipha iThelevishini yakho kusokhethi kagesi, linda umzuzu. Hlanganisa i-Tv yakho emuva kusokhethi yamandla bese uqalisa kabusha i-Netflix.
Qiniseka ukuthi isethi yakho ye-Tv ixhunywe kahle ku-inthanethi.Bheka ezinye izinhlelo zokusebenza kusethi ye-Tv, uma nazo zibhekene nenkinga, maningi amathuba okuthi i-intanethi inephutha, uma isebenza ngaphandle kwenkinga futhi yi-Netflix kuphela enenkinga, qhubeka uzame izinyathelo ezilandelayo zokuxazulula inkinga.
Phuma ngemvume kuhlelo lokusebenza lwe-Netflix ku-Tv yakho bese ungena ngemvume futhi.
Ukufaka kabusha uhlelo lokusebenza lweNetflix kuzosula imininingwane yakudala futhi kuyivuselele kuTv, lokhu kungasiza uhlelo lokusebenza ukwethula kahle.
Bheka izibuyekezo zohlelo lokusebenza lweNetflix neTv OS. Qiniseka ukuthi zombili zisesikhathini.
2. INetflix ayisebenzi kuRoku
Kulesi sigaba, sizoxoxa ngezinkinga zokuxazulula izinkinga ze-Netflix kumadivayisi we-Roku. Akunandaba ukuthi usebenzisa yiphi imodeli, lezi zinyathelo zivamile kubo bonke.
Lesi sinyathelo sisebenza iningi lesikhathi. Konke okufanele ukwenze ukukhipha idivayisi ye-Roku bese uyixhuma futhi ukuze ubone ukuthi inkinga isixazululiwe yini.
Ukwenza i-Netflix isebenze ku-Roku landela lezi zinyathelo.Cindezela u-'Khaya 'ukufaka imenyu yasekhaya yeRoku> chofoza ku-'Izilungiselelo'> chofoza ku-'Netflix settings '> chofoza ku-'deact this player from my Netflix account'.Ngemuva kokuyivimbela ngempumelelo, qiniseka ukuthi uyisebenzisa futhi.
Bheka izibuyekezo kudivayisi ye-Roku bese uqinisekisa ukuthi ivuselelwa kunguqulo yakamuva. Landela izinyathelo ukuhlola izibuyekezo.
Cindezela u-'Khaya 'ukufaka imenyu yasekhaya ye-Roku> chofoza ku-'System & updates'> chofoza ku 'hlola manje'.
3. INetflix ayisebenzi ku-Amazon Tv Stick
Ake sibheke izindlela zokuxazulula izinkinga zokulungisa i-Netflix ku-Amazon Tv stick
Qiniseka ukuthi induku ye-Amazon Tv ixhunywe kahle ku-router ye-Intanethi yasekhaya. Bona ukuthi izinhlelo zokusebenza ngaphandle kweNetflix zisebenza kahle yini. Uma ezinye izinhlelo zokusebenza zinenkinga yokulayisha lapho-ke Ukuxhumana kungaba yinkinga. Uma ngabe iNetflix inenkinga kuphela, bese ulandela izinyathelo ezilandelayo zokuxazulula inkinga.
Cisha induku yomlilo ye-Tv ngokuphelele bese uyivula futhi. Lesi yisilungiso esheshayo nesilula esisebenza isikhathi esiningi.
Ukusula idatha yeNetflix, landela lezi zinyathelo.Chofoza inkinobho ethi 'Ikhaya'> chofoza 'Izilungiselelo'> chofoza 'Izicelo'> chofoza ku-'Phatha izinhlelo zokusebenza ezifakiwe '> thola i-netflix kulolu hlu bese uchofoza ku-'Netflix'> chofoza ku-'Sula idatha '.
Iya kumenyu 'yokusetha'> chofoza ku-'System '> chofoza ku-'Mayelana'> chofoza ku-'system update 'futhi uhlelo luzobheka izibuyekezo, uma lubuzwa, vuma futhi ubuyekeze i-firmware. Qalisa kabusha induku ye-Tv.
4. INetflix ayisebenzi kuXbox Console
Vumela ukuxazulula izinkinga ze-Xbox nge-Netflix kulesi sigaba.
Ukusetha kabusha i-Netflix kuvame ukuxazulula izinkinga eziningi futhi i-Netflix iyaqhubeka isebenza kahle. Ngakho-ke sincoma ukwenza lokhu kuqala. Ngezansi kwesiqondisi ngesinyathelo ngesinyathelo sokusetha kabusha i-Netflix.
Usebenzisa okhiye bemicibisholo kusilawuli iya ku-Netflix.
Uma usunesithonjana seNetflix, chofoza inkinobho yemenyu kusilawuli. Lokhu kuzokukhombisa uhlu lwezinketho ezihambisana nohlelo lokusebenza lweNetflix
Chofoza inketho ethi 'Yeka' ohlwini.
Qalisa kabusha uhlelo lokusebenza ngemuva kokuyeka.
Uma ukuxhumana kuyinkinga. Cisha amanethiwekhi angenantambo bese uxhuma i-Xbox ku-Ethernet. Lokhu kuzothuthukisa ukuxhumana ngemajini futhi kusize i-Netflix isebenze kalula.
UCortana ungumsizi owakhelwe ngaphakathi ku-Xbox owenziwe yiMicrosoft, okuyivumela ukuthi isize abasebenzisi abaningi ukuxazulula inkinga ye-Netflix. Ngezansi kwesiqondisi ngesinyathelo ngesinyathelo sokuvula i-cortana.
Vula izilungiselelo ku-Xbox.
Chofoza kunketho ye-'System '.
Chofoza ku-'Cortona izilungiselelo '.
uzokhonjiswa okuvelayo kwesivumelwano.
Manje usuyinike amandla i-cortona ngempumelelo.
5. INetflix ayisebenzi ku-Playstation Console
Kule ngxenye yendatshana, funda kahle ukuthi ungaxazulula kanjani izinkinga ze-Netflix ku-PlayStation. Ake singene kuwo.
Khipha i-Playstation kusokhethi yamandla. Ake siphumule umzuzu bese siphinde sikuxhuma. Lesi yisinyathelo esiyisisekelo sokuxazulula inkinga kepha senza izimanga futhi singaxazulula inkinga ngokushesha
Nqamula i-Playstation kunethiwekhi engenantambo bese uyixhuma nge-ethernet. Lokhu okuzokwenza ukuthi kuzonikeza ukuxhumana okuzinzile kakhulu kokusebenzisa izinhlelo zokusebenza uma kuqhathaniswa nenethiwekhi engenantambo.
Lesi sinyathelo sizosiza ukusula ngokuphelele idatha yakudala futhi nohlelo lokusebenza olulandiwe luzoba lwakamuva ukuze ungakhathazeki ngokuhlola izibuyekezo. Ngezansi kwesiqondisi ngesinyathelo ngesinyathelo sokuthi ungayifaka kanjani kabusha iNetflix ku-Playstation.
Iya kumenyu enkulu
chofoza ku-'Tvv nevidiyo '
khetha i-'Netflix 'ohlwini
cindezela inkinobho yezinketho kusilawuli bese uchofoza inketho ethi 'Susa'
ususe ngempumelelo uhlelo lokusebenza lwe-Netflix ku-Playstation.
Yilande futhi kusuka esitolo sohlelo lokusebenza bese uyifaka.
1Q. Kungenzeka yini ukuthi konke kulungile ekugcineni kwami ​​futhi iseva yeNetflix uqobo iphansi?
Yebo, ngokuqinisekile kungaba lolu daba kwesinye isikhathi. Ungahlola ukuthi ngabe Iseva yeNetflix iphansi ngokuvakashela le sayithi.
2Q. kuthiwani uma ngaphandle kokuzama zonke izinyathelo, angikwazi ukuxazulula izinkinga?
Kuleso simo, udinga ukuxhumana nethimba lokuxhaswa kwamakhasimende leNetflix.
3Q. Ngingasebenzisa amadivayisi amangaki ngasikhathi sinye?
Kuya ngokuphelele ngohlelo lwakho oluthengiwe. Uhlelo oluyisisekelo luvumela idivaysi eyodwa kanti uhlelo lwe-premium luvumela amadivayisi afinyelela kwangu-4.
Sizame konke okusemandleni ethu ukumboza wonke amapulatifomu aqhutshwa yiNetflix futhi sikunikeze zonke izinyathelo ezidingekayo zokuxazulula izinkinga ngezinkinga ezivelayo. Ungazilungisa kahle lezi zinkinga ngokwakho ngeziqondisi zethu zesinyathelo ngesinyathelo futhi ube nezifiso zakho zokubuka ngokweqile waneliseke.
I-Netflix vs I-Amazon Prime Video
Ungalusebenzisa Kanjani uhlelo lokusebenza lwe-Google Home ku-PC?
Ungayibuka Kanjani I-Prime Video ku-TV?
iwebhusayithi yama-movie wamahhala aku-inthanethi
mp3 yenza isiguquli se-youtube
bukela izixhumanisi zama-movie net site elisha
amasayithi wokusakaza ama-movie we-ps4
amazon prime mahhala nge-imeyili yasekolishi